Golaha Guurtida Oo sheegay wakhtiga Doorashadu ku Qabsoomayso |
Golaha Guurtida Oo sheegay wakhtiga Doorashadu ku Qabsoomayso
Golaha Guurtidda JSL , ayaa isagoo tixraacayay warqada Madaxwaynaha JSL ee LrJSL/M/GG/81/2-3218/04/2015 ee25/04/2015, kuna saabsanayd nuxur ahaan ka waajibaad qaadashada dibu- dhaca ku yimid doorashadii Madaxtooyada iyo Golaha Wakiiladda, kuna lifaaqnayd warqaddii koomishanka doorashooyinka qaranka, ayaa gudo galay muddo korodhsiimada .
warqadda lambarKDQ/XK/406/2015 ee 20/04/2015, kana soo
xigeenkaiyo Golaha wakiiladdaba, ‘’sido kalana anay waafaqsanayn qoddobada
42aad iyo 83aad ee DastuurkaJSL .
4– Muddo xileedka Golaha Guurtiddu wuxu noqonayaa hal sano ka dib (one year after) dhammaadka muddo xileedka Golaha wakiiladda oo noqonaya27/4/2017,sida waafaqsan ama ku cadba go’aanka lambar GW/KF-19/245/2003 ee 29/03/2003, una dhigan “in muddada xilka Golaha Guurtiddu markastaba hal sano ka dambayso taariikhda dhammaadka muddada xilka Golaha wakiiladda ” .
5- Doorashada Maddaxtooyada iyo Golaha Wakiiladduwaxay qabsoomayaan isla hal wakhti, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyay , oowaafaqsan qoddobadda 42aad iyo 83aad ee Dastuurka Dalka Jamhuuriyada Somaliland .
Allaa Mahadleh Saxeexa Shir/Gudoonka